यो काम गर्दछ?
बिरामी बिरामी ट्र्याकिंग
हिंड्ने क्रममा हराउनेहरू
जोसँग मेमोरी मुद्दाहरू छन्
व्यक्ति जो स्वतन्त्रता कायम राख्न चाहन्छन्
Caregivers जो एक प्रिय एक मा जाँच गर्न चाहान्छन्
जी संचार गर्न सक्षम भयो
फिट हुन insoles काट्नुहोस्
लगभग कुनै मा
Insoles सेट गर्नुहोस्
एक वायरलेस चार्जिंग प्याड प्रत्येक hours 36 घण्टा एक पटक
जियो फेंस सेट अप गर्नुहोस्
एक सुरक्षित सुरक्षित
प्रियलाई जाँच गर्नुहोस्
सुविधा बाट एक
तपाईको स्मार्ट फोनको
GPS Insoles एक हटाउन योग्य जुत्ता insole मा लुकाइएको एक स्मार्टफोन हो। यी स्मार्ट इनसोल्सले तपाईको सेल फोन जस्तै जीपीएस र सेलुलर टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ। तिनीहरू केवल तपाईंको सेल फोन जस्तै चार्ज गरिएको छ र एक सक्रियता र डाटा सेवा योजनाको आवश्यक छ।
उपकरणमा वारेन्टी के हो?
स्टार चेतावनी को चेतावनी छ कि यदि घटनामा STAAR Alert द्वारा प्रस्तुत र सिग्नलिंग प्रणाली उपकरणको कुनै पनि अंश दोष वा साधारण पोशाकको कारण निष्क्रिय हुनेछ र यस सम्झौता अन्तर्गत तपाईंको घरमा स्थापित हुँदा, यसले मर्मत वा प्रतिस्थापन गर्दछ कुनै पनि दोषपूर्ण हिस्सा प्रतिस्थापन गर्दछ। प्रणाली, कुनै शुल्क छैन, यथाशीघ्र यथोचित व्यावहारिक रूपमा तपाईंलाई सूचना दिए पछि प्रणालीले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन वा यदि मासिक चेकले यसमा कुनै समस्याहरू प्रकट गर्दछ। हामीलाई कल गर्नुहोस् १-8००-383811--7१4। तुरून्त सेवा आवश्यक पर्दछ। तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि त्यस्ता कमजोरीहरूको खण्डमा तपाईंको एकमात्र र विशिष्ट उपचार खराबी उपकरणहरूको मर्मत वा प्रतिस्थापन हुनेछ।
*** एक पटक insoles ट्रिम गरेपछि तिनीहरू फिर्ता हुन सक्दैन। ***
कुनै पनि ग्राहक जसले सेवा (हरू) STAAR अलर्टबाट खरिद गर्ने calendar० पात्रो दिन हुन्छ यदि तिनीहरूले सेवा जारी राख्न जाँदैछन् भने। तिनीहरूले कुनै पनि कारणका लागि सेवा बन्द गर्न छनौट गर्न सक्दछन् जबसम्म तिनीहरूले सबै भागहरूको साथ उपकरण फर्काउँदछन् र उपकरण नयाँ काम गर्ने अवस्थामा कम सामान्य पोसाक छ र च्यात्छन्। उपकरण प्राप्त भएको ग्राहकबाट days० दिन भित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
यदि उपकरण फिर्ता छैन भने उपकरणको लागत ग्राहकको क्रेडिट कार्डमा चार्ज हुनेछ। थप विवरणहरूको लागि कृपया कल गर्नुहोस् १-8००-38-381147१।।
हाम्रो जीपीएस Insoles हाम्रो प्रत्येक ग्राहकहरु को लागी बनाइएको हो। एक सटीक मूल्य सक्षम गर्न, कृपया कल गर्नुहोस् र हाम्रो ज्ञात केयर प्रतिनिधिहरु मध्ये एक बाट कुरा गर्नुहोस् । तिनीहरूले तपाइँलाई अनुकूलन समाधान निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
कृपया कल गर्नुहोस् 1-800-338-7114